Hogwarts - wesikole ukwenza imilingo nokuthakatha kuchungechunge odumile amabhuku Dzhoan Rouling mayelana umthakathi abasha isibazi - Harry Potter. Kulesi sikole kukhona amandla ezine, ngasinye umlando walo futhi kusobala ukuthi uhlobo oluthile lwabantu. abasebenzi Hogwarts lenzeka Izanusi ezine futhi yaqanjwa kubo.
Ngalokhu ubuhlakani Hat libabiza labo izimfanelo ezinjalo elavelela ngaphezu kwawo wonke amanye izinzuzo zokwethembeka, ukuphana isibindi. Grifindortsev ihlukanisa ukuzimisela kwabo ukulwela iqiniso nothando, noma ngabe akuyona zinkulu. Kodwa emuva umsuka ukudalwa lo mnyango.
Kuyinto umsunguli Godric Gryffindor, ophinda abe umsunguli wesikole Hogwarts. Godric kakhulu ukuba lenze abantu isibindi. isimo okuphoqelekile ngaphambi ukubhalisa at abasebenzi Hogwarts - ukuhlolwa ukuthi ubamba isigqoko. I Ukuhlelwa Hat - brainchild of Godric Gryffindor. It yadalwa ukuze kutholakale lokho abasebenzi Hogwarts kufanele senze lokhu noma lokhuya umfundi. Igugile ekhanda, liyakwazi ukufunda izingqondo futhi ukucacisa nezifiso abafundi esizayo. abasebenzi Hogwarts kuhlobene, ngoba ulwazi ngamunye wabo okufanayo, kuphela umehluko kobuntu. Inhloko Gryffindor - UProfesa Minerva McGonagall, oyiphini lomqondisi itoho noprofesa wokuguqulwa kukaJesu isimo.
Kuleli ubuhlakani sayithola abantu wokuvelela kakhulu, wabashukumisa futhi beqiniseka. Ngokuphambene nalokho okukholelwa yiningi, le Slytherins ayimibi, nje lababantu kanzima kakhulu futhi ngokuqinile nomgomo walo. abasebenzi Hogwarts egcwele abantu abahlukahlukene, Slytherin akuyona okuhlukile, kodwa nokho wayekholelwa ukuthi kuphela uthumela okubi akulungile. Slytherins bekwi kuphela yokuthi bakuthola ewusizo. Slytherin owasungula Salazar Slytherin, futhi lama- the Faculty - UProfesa Severus Snape futhi Goratsiy Sliznort. Severus wayenguthisha potions bese Defense Against Ubuciko Dark, uHorace wayebuye abe uthisha potions.
Leli khono Ukuhlelwa Hat wathumela ngokuvamile nempi. Puffenduytsy - lena kakhulu abathanda ukuthula ngubani ukucasuka, yize ungabonisi ke. Ziyakwazi nabaphikisi enkulu ubudlova, ngoba bethanda nemvelo futhi bakholelwa ukuthi zonke kufanele kube ukulinganisela okungukuthi kulula ukubhubhisa unya. Kuleli ubuhlakani ukufunda abafundi benomusa futhi ophanayo. Ababona njengoba nobudlelwano njengoba abanye, kodwa kulula ukuba zivuleke uzizwe ujabule kumbuthano labangane.
Kuyinto umsunguli noHelga Hufflepuff. Dean - UProfesa Pomona Stem, Herbology uthisha.
Isici se-reception e-Faculty kwaba iqiniso lokuthi wayengumuntu, njengoba umthetho, khetha abantu nge Wit abukhali futhi ubuntu. Abafundi khono abe nolwazi olunzulu cishe ngazo zonke izinto, kodwa likwazi ukuhlukaniseka kalula ukugxila ngomzuzu wamanje esihlokweni. Ngesikhathi esifanayo izinga emihle nemibi abafundi lokhu ubuhlakani wukuthi bangafihla imizwa yabo yangempela, nakuba nginikeza nalezo abanye bafuna ukubona. Umsunguli lo mnyango - noRowena Ravenclaw. Futhi Dean - Mfundisi izifundo Izintelezi UProfesa filius Flitwick.